Ma wo yɔnko aboa ho nhia wo (1-4)
Ɔbea nnhyɛ ɔbarima ataade, na ɔbarima nnhyɛ ɔbea ataade (5)
Wo ne mmoa nni no yiye (6, 7)
Gye ban wɔ wo dan atifi (8)
Nneɛma bi a worentumi mfa mfra (9-11)
Yɛ pɔw tuatua wo ntaade ano (12)
Ɔbarima ne ɔbea nna a ɛto mmara (13-30)
22 “Sɛ wuhu wo nua nantwi anaa ne guan sɛ wayera a, nyi w’ani nto nkyɛn.+ Fa no kɔma wo nua no. 2 Nanso sɛ wo nua no mmɛn wo anaa wunnim no a, ɛnde fa aboa no bra wo nkyɛn wɔ wo fi kɔpem sɛ wo nua no bɛba abɛhwehwɛ no, na wode no ama no.+ 3 Sɛ wo nua afurum, n’ataade, anaa ne biribiara yera na wuhu a, yɛ saa ara; ɛnsɛ sɛ wuyi w’ani. 4 “Sɛ wuhu sɛ wo nua afurum anaa ne nantwi da kwan mu a, nyi w’ani nto nkyɛn. Boa no ma ɔmma aboa no so.+ 5 “Ɛnsɛ sɛ ɔbea hyɛ ɔbarima ataade, na ɛnsɛ sɛ ɔbarima nso hyɛ ɔbea ataade. Yehowa wo Nyankopɔn kyi obi a ɔyɛ eyinom. 6 “Sɛ wokɔto sɛ anomaa berebuw sɛn dua so anaa ɛda fam, na anomaa mma anaa nkosua wom, na maame no butuw ne mma anaa ne nkosua so a, hwɛ na woamfa maame no anka ne mma no ho ankɔ.+ 7 Ma maame no nkɔ na fa ne mma no. Woyɛ saa a, ebesi wo yiye na woanyin akyɛ. 8 “Sɛ wusi ofi foforo a, gye ban wɔ ɔdan no atifi+ na obi amfi hɔ anhwe ase, na wo fi no anni mogya ho fɔ. 9 “Ɛnsɛ sɛ wudua aba abien a ɛsono emu biara wɔ wo bobefuw* mu,+ anyɛ saa a wobegye nnɔbae no ne bobefuw no mu aba nyinaa akɔ tenabea kronkron hɔ. 10 “Mfa nantwi ne afurum mmom mfuntum asaase.+ 11 “Nhyɛ ataade a wɔde oguan nwi ne nwera abom anwene.+ 12 “Ntama biara a wubefura no, yɛ pɔw tuatua ano anan no.+ 13 “Sɛ ɔbarima ware na ɔne ɔbea no da, na ɔmpɛ no bio* a, 14 ebia ɔbɛbɔ ɔbea no sobo sɛ wabu bra bɔne na wagu n’anim ase sɛ, ‘Ɔbea yi, mewaree no, nanso me ne no dae no, manhu hwee a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ ɔbaabun.’ 15 Ɛba saa a, ababaa no papa ne ne maame mfa nea ɛkyerɛ sɛ ababaa no yɛ ɔbaabun mmɛkyerɛ kurow no mu mpanyimfo wɔ kurow no pon ano. 16 Afei ababaa no papa nka nkyerɛ mpanyimfo no sɛ, ‘Mede me babea maa ɔbarima yi aware, nanso ɔmpɛ no.* 17 Wabɔ no sobo sɛ wabu bra bɔne na waka sɛ: “Manhu hwee a ɛkyerɛ sɛ wo babea no yɛ ɔbaabun.” Nanso nea ɛkyerɛ sɛ na me babea no yɛ ɔbaabun ni.’ Afei wɔntrɛw ntama no mu wɔ kurom hɔ mpanyimfo anim, 18 na kurom hɔ mpanyimfo+ no ntwe ɔbarima no aso.+ 19 Wobegye ɔbarima no nnwetɛbona* 100 de ama ababaa no papa, efisɛ wagu Israelni baabun anim ase.+ Ɔbɛkɔ so ne no atena sɛ ne yere; ne nkwa nna nyinaa, ɔrentumi nnyaa no. 20 “Na sɛ ɛba sɛ asɛm no yɛ nokware na wɔanhu biribiara a ɛkyerɛ sɛ ababaa no yɛ ɔbaabun a, 21 ɛnde wɔmfa ababaa no mmegyina ne papa fi anim na ne kurom mmarima nsiw no abo nkum no, efisɛ wabɔ aguaman* wɔ ne papa fi+ ayɛ aniwude+ wɔ Israel. Monyɛ saa mfa nyi adebɔne no mfi mo mu.+ 22 “Sɛ ɔbarima bi ne obi yere da na wɔkyere wɔn a, ɔbarima a ɔyɛɛ saa no ne ɔbea no nyinaa, ɛsɛ sɛ wokum wɔn.+ Monyɛ saa mfa nyi adebɔne no mfi Israel. 23 “Sɛ ɔbarima bi de n’ano to ababaa a ɔyɛ ɔbaabun so na ɔbarima foforo hu no wɔ kurom na ɔne no da a, 24 momfa wɔn baanu mmra kurow no pon ano na munsiw wɔn abo nkum wɔn. Nea enti a ɛsɛ sɛ wɔn baanu no wu ne sɛ, na ababaa no wɔ kurom nanso wanteɛteɛm, na ɔbarima no nso agu ne yɔnko yere anim ase.+ Monyɛ saa mfa nyi adebɔne no mfi mo mu. 25 “Nanso ababaa a obi de n’ano ato no so no, sɛ ɔbarima no hyiaa no wɔ wuram ɛnna ɔyeree no ne no dae a, ɛnde ɔbarima a ɔne no dae no nkutoo na obewu. 26 Ababaa no de, nyɛ no hwee. Ɔnyɛɛ bɔne biara a enti ɛsɛ sɛ owu. Asɛm yi te sɛ nea ɔbarima bi atow ahyɛ ne yɔnko so akum no* pɛpɛɛpɛ.+ 27 Wuram na ohuu no. Ababaa a obi de n’ano ato no so no teɛteɛɛm, nanso na obiara nni hɔ a obegye no. 28 “Sɛ ɔbarima bi hu ababaa bi a ɔyɛ ɔbaabun a obiara mfaa n’ano ntoo no so, na ɔkyere no ne no da na wohu wɔn a,+ 29 ɔbarima a ɔne no dae no ntua sika nnwetɛbona 50 mma ɔbea no papa na ɔnware no,+ efisɛ wagu n’anim ase. Ne nkwa nna nyinaa ɔrentumi nnyaa no. 30 “Ɛnsɛ sɛ obiara fa ne papa yere, na wangu ne papa anim ase.*+
^ Anaa “ɔpo no.”
^ Anaa “wapo no.”
^ Anaa “wasi tuutuu.”
^ Anaa “akum ɔkra no.”
^ Nt., “wanyi ne papa nkataho.”